Ungawalanda kanjani amavidiyo we-Twitter nama-Gifs? - Komphakathi
I-Twitter iyinkundla yezenhlalo ehlukahlukene kakhulu lapho abantu babhala khona imicabango yabo, imibono yabo, kanye nesipiliyoni sabo. Imvamisa, ingaba yindawo yokuthola ama-meme amasha noma amavidiyo ahehayo nezipho. Eziningi zalezi zikhathi, ungahle uthande into kakhulu kangangokuba ufuna ukuyabelana nabangani bakho.
Kodwa-ke, kungaba ngumsebenzi owesabekayo uma ungazi ukuthi ungabasindisa kanjani. Ngemuva kwalokho kuzofanela ushintshe konke okuqukethwe ku-Twitter ukukuthola futhi. Konke lokhu kungumsebenzi omningi kakhulu kokuncane kakhulu umvuzo . Yingakho udinga ukulanda amavidiyo we-Twitter nezipho.
I-Twitter ayinayo inketho eyakhelwe ngaphakathi yokugcina noma ukulanda amavidiyo nama-GIF ohlangabezana nawo. Ngakho-ke, kuzodingeka usebenzise uhlelo lokusebenza oluhlukile noma ipulatifomu ukulanda la mavidiyo nezipho. Kunezilandi ezingenakubalwa zokulanda amavidiyo nezipho emakethe. Kodwa-ke, ngaphambi kokuthi uthathe isinqumo sokuzisebenzisa, qiniseka ukuthi ziyiqiniso.
Kunamapulatifomu amaningi omgunyathi noma wokugenca azodlula ubumfihlo bakho futhi asebenzise okuqukethwe. Ngakho-ke, udinga ukuqinisekisa ukuthi ipulatifomu iyiqiniso. Ngalokho, ungathembela kuzingxenyekazi ezikhokhelwayo noma ezinokwethenjelwa (eziqinisekisiwe).
Umhlahlandlela Wezinyathelo Ngezinyathelo:
Ukulanda ividiyo yeGif, vakashela noma iyiphi ividiyo yokuqala ye-twitter noma isilandi se-gif.
Kuvidiyo noma i-Gif, chofoza ku-share
Kopisha isixhumanisi esiqondile (https://twittervideodownloader.com/) ukuze wabelane ngaso lapho
Vakashela ividiyo ye-Twitter noma isilandi se-gif
Iningi lalawo linendawo ye-URL. Ukuphela kokufanele ukwenze ukunamathisela i-URL kubha
Ngemuva kwalokho ungagcina noma ulande
Abanye abalandi bakuvumela ukuthi ushintshe ivolumu, usayizi, noma ikhwalithi yokuqukethwe ngokusho kwakho ukuze ukwazi ukubheka lezi zinketho futhi.
Ngenye indlela, ungalanda uhlelo lokusebenza ku-iOS noma ku-Android oluzosebenza ne-Twitter futhi likulethele enye inketho yokulanda noma ukugcina izithombe kudivayisi yakho. Ubuchwepheshe yinto enhle, futhi kukhona izinketho ezinjengalezi ezitholakalayo.
Ingabe Kusemthethweni Ukulanda Amavidiyo we-Twitter nama-GIF?
Ukuba semthethweni kokuqukethwe kuncike ohlotsheni lwevidiyo noma i-Gif. Uma kuyi-gif yangempela noma ividiyo, kungadingeka ukuthi uthole imvume yomnikazi woqobo ukuyilanda noma ukuyisebenzisa. Kodwa-ke, uma kuyividiyo edumile noma i-Gif engenalo ilungelo lobunikazi, noma ngubani angayilanda.
Isikhathi esiningi, ungalanda amavidiyo nezipho kusuka ku-Twitter njengoba kungekho ubunikazi obuthile. Kodwa-ke, uma ucabanga ukuthi kungenzeka wephula ubumfihlo babanye, noma uma kungukuqukethwe okukhokhelwayo, akufanele ukulande. Konke kuya ngokuziphatha nokuziphatha komuntu.
Ungalanda Kanjani Ngokuphepha Amavidiyo we-Twitter nama-GIF?
Kufanele uthembele kulezi zinhlelo zokusebenza noma amapulatifomu ewebhusayithi anikeza amandla okulanda. Kodwa-ke, uma ungaqiniseki ngobuqiniso babo, ungasebenzisa i-VPN. Usebenzisa i- I-VPN ingenye yezindlela ezinhle kakhulu zokuqinisa ukuphepha kwe-inthanethi yakho. Izokuvikela ezinsongweni ezingaba khona. Vele, uzodinga i-VPN ekhokhelwe ukuze uvikeleke kahle. Ngenye indlela, inguqulo yesilingo nayo ingawenza lo msebenzi. Le ngenye yezindlela eziqinisekile zokuqinisa ukuphepha kwe-inthanethi.
Ungalanda Kuphi Amavidiyo e-Twitter nama-GIF?
Kunenqwaba yezinketho ezitholakala ku-inthanethi ezikuvumela ukuthi ulande amavidiyo we-Twitter nama-gif noma kuphi lapho ufuna khona. Ungazilanda ku-PC yakho, kwi-laptop, noma kumadivayisi we-smart. Kungaba yinkohliso encane ukuyilanda ku-iOS ngenxa yokuphepha kokuphela kokuphela, kepha kungenzeka.
I-Android ne-PC kuvulekile, futhi kulula kuwe ukuthola amawebhusayithi noma izinhlelo zokusebenza ezikuvumela ukuthi uzilande. Okwe-iOS, ungahle uthembele entweni efana ne-GIFWrapped, uhlelo lokusebenza olusebenza nesixhumi esibonakalayo se-iOS ukulanda ama-GIFs.
Lapho usulande ama-GIF noma amavidiyo, ungawabelana nanoma ngubani ofuna njengoba eyifayela lakho. Ungawadlala inqobo nje uma unohlelo lokusebenza olusekelwayo. Kwesinye isikhathi, kungadingeka ukuthi uwaguqule ukuze uwadlale ngokufanele.
Amawebhusayithi ahamba phambili wokulanda amavidiyo we-Twitter nezipho:
Izinhlelo zokusebenza ezihamba phambili zokulanda amavidiyo we-Twitter nezipho:
Uhlelo lokusebenza lokulanda ividiyo le-Twitter kusuka ku I-Google Play Isitolo
Izinzuzo Zokulanda Amavidiyo we-Twitter nama-GIF:
Ukusebenzisa i-intanethi kuseyinto yokunethezeka emazweni amaningi, futhi kungabiza kakhulu. Ngeke uhlale ulindele ukubhuqa uphinde ulayishe ama-gifs namavidiyo afanayo ozowabuka futhi. Konke lokhu kuzofaka isandla ekusetshenzisweni kwedatha ngokweqile okuzogcina sekushisa imbobo ephaketheni lakho. Kodwa-ke, uma unalawa mavidiyo nama-GIF alandiwe, ungawabuka noma kuphi, ngaphandle kokukhathazeka ngokusetshenziswa kwedatha nemali ekhokhwayo eyeqile.
Ngokufanayo, kuyindlela enhle yokubuka ungaxhunyiwe ku-inthanethi lapho usohambweni, ukanisa, noma kwenye indawo ngaphandle kwe-inthanethi. Ukubuka ungaxhunyiwe ku-inthanethi kukuvumela ukuthi ukwazi ukufinyelela kwezokuzijabulisa ngaphandle kokukhathazeka nge-inthanethi. Ngokuqondene nama-gifs, ungahle ufune ukuwathumela kubangani bakho bese wabelana ngawo. Ama-GIF ajabulisa kakhulu futhi angaba kuhle ekuzivezeni.
Ngenkathi kunama-GIF amaningi athumela amakhibhodi nezinhlelo zokusebenza, ungahle ufune leyo Gif ethile, futhi ngalokho, udinga ukuyilanda. Ukuthi ukulanda ama-GIFs ku-Twitter kungaba yindlela elula. Ezinye izinzuzo eziningi ziyefana nokonga idatha, ukonga isikhathi, nokwabelana nabangani bakho. Noma kunjalo, kufanele ukhumbule ukuthi ungasebenzisi noma iyiphi indlela engekho emthethweni ukulanda la mavidiyo noma ama-GIF.
Uma okuqukethwe kungokwangempela futhi kungumnikazi womunye umuntu, kungcono ukuthatha imvume yakhe ngaphambi kokukulanda noma ukukusebenzisa. Ngaphandle kwalokho, ungagcina ngesiteleka se-copyright esingabiza isamba semali esikhulu.
I-Twitter ngokungangabazeki iyinkundla yokuzijabulisa emnandi lapho ungasebenzisa khona amazwi abanye abantu ukuziveza. Le platform enkulu ingakulethela izindaba ezinhle, iqoqo lamavidiyo, nama-gifs ongafuna ukuwabelana nomndeni wakho nabangane. Uma usebenzisa i-Twitter video & GIFs downloader, impilo yakho izoba ntofontofo.